ပြေးလမ်းချော်လေရော့သလား အမေစုရယ်? | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« CNN:The forgotten people.
ကျောက်တော်မြို့ တွင် ၇ခိုင် အကြမ်းဖက် သမားများကို လက်နက်များနှင့် အတူဖမ်းဆီးမိခြင်း »
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံရောက် မြန်မာမိသားစုဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံကာ နယူးဒေလီမြို့၌ ဤသို့ မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
“ ကျွန်မတို့ ဒီနောက်ဆုံးအပိုင်းကို အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ကျော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုယင် နောင်လာမယ့် ကျွန်မတို့ မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ တကယ့်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့၊ တကယ့်ကို လုံခြုံတဲ့၊ တကယ့်ကို လွတ်လပ်တဲ့ ၊ တကယ့်ကို တိုးတက်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီး ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မ ယုံကြည်ပါတယ် ”
အမေစု ရည်ညွှန်းနေသော နောက်ဆုံးအပိုင်း ဟူသည်ကို ကျွန်တော်တို့အားလုံး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိချင်နေပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် လူမျိုးနွယ်စုများအား မျိုးဖြုတ် သုတ်သင်ရေး – Genocide စီမံကိန်းကြီးလော၊ သို့တည်းမဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံကို မဟာဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံတော်အဖြစ်ကြေငြာ နိုင်ရန် သန်းခေါင် စာရင်းသစ်ပြန်လည် ကောက်ယူခြင်းဟူသည့် အခွံကိုစွပ်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ် အမည်ခံလျှင် မည်သည့်မွတ်စလင်ကို မဆို နိုင်ငံသားဟု အသိအမှတ်ပြုလျက် မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးမည့် လှုပ်ရှားမှုလော၊ သို့တည်းမဟုတ် အိန္ဒိယ အနွယ်များမှန်သမျှကို နိုင်ငံသားအဖြစ်မှ ပယ်ထုတ်ခြင်းလော ၊ သို့တည်းမဟုတ် အမေစု၏ NLD ပါတီဝင် အောက်ခြေအဆင့်အုပ်စုအချို့မှ RNDP နှင့်ပူးပေါင်းကာ အကြမ်းဖက်ဝါဒ ဆောင်ရွက် နေခြင်းအပေါ် ရှင်းလင်း သန့်စင်ရေးလော၊ သို့တည်းမဟုတ် အမှန်တကယ် တရားဥပဒေ စိုးမိုးနိုင်ရေးလော ? ကျွန်မတို့မျိုးဆက်သစ်ဟုဆိုရာ၌ အစ္စလာမ်ဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ ဆစ်ခ် စသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မဟုတ်သူများ ပါဝင်ခြင်း ရှိမရှိ ?
အမေစုအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးအရ စကားလုံးလှလှ အသုံးပြုသွားသော်လည်း ၄င်းစကား၏ နောက်ကွယ်၌ မြုပ်ကွက်လေးရှိ နေသလိုလို ခံစားလိုက်ရပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မကြာသေးမီက “ ရခိုင်ပဋိပက္ခဟာ ဘာသာရေးနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်း “ ဟု အမေစုမှ အတိအကျ ထုတ်ဖော် ပြောကြားသွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ မီဒီယာပေါင်းစုံမှ တစ်ဖက်စောင်းနင်း သတင်းဖော်ပြချက်တွင် ပါဝင်နေသော ဘင်္ဂါလီ၊ ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စ၏ ဘောင် အပြင်ဖက်သို့ မိုင်ပေါင်းများစွာ ခရီးကျွံလာပြီး အစ္စလာမ် ဘာသာ နှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်(မုစ်လင်မ်)များအပေါ် ပေါက်လွှတ်ပဲစား အမြင်ထားရှိနေမှုများ/ ဆက်ဆံနေမှုများမှာ လက်တွေ့အခြေအနေအရ ငြင်း မရအောင် တွေ့နေရပြီဖြစ်ပါသည်။
ကြားနေ၀ါဒကို ကျွန်တော်တို့ လက်ခံပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဆက်နွယ်နေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ဘက်မလိုက်ဝါဒကိုမူ မည်သည့် ဘာသာတရားမှ လက်ခံခြင်း မရှိပါ။ လူမှန်သမျှ ဘက်တစ်ခုခုသို့ လိုက်သည်ချည်း ဖြစ်ပါသည်။ တရားမျှတမှု တည်းဟူသော သစ္စာတရား ဘက်တော်သားလား၊ မတရားမှုတည်း ဟူသော မိစ္ဆာတရား ဘက်တော်သားလား – တစ်ခုခုသာ ဖြစ်ရပေမည်။ ကျွန်တော်တို့ချစ်ရသော အမေစု အတွက် ကျွန်တော်တို့အားလုံး စိုးရိမ်နေပါသည်။ ဖုံးကွယ် မရနိုင်အောင် ဖြစ်ပွားလာသော ရခိုင်ပြည်နယ်မှ အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားတို့၏ Genocide ကိစ္စကြီးအပေါ် အမေစုမှ ဘက်မလိုက်ဝါဒဖြင့် ရှောင်ထွက် သွားခြင်းက ယင်းအမှုအား အဆိပ်ပင် ရေလောင်းရာ ရောက်သွားမည်စိုး၍ ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းနေရာ ဒေသများထံ အမေစုအနေဖြင့် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ တစ်ကြိမ်တစ်ခါ သွားရောက်လေ့လာစေလိုပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်လွှား ခရီးဆန့်သလို နိုင်ငံတွင်းရှိ ဒုက္ခသည်များထံသို့လည်း တစ်ချက်မျှတော့ သွားရောက် အားပေးစေလိုပါသည်။ တဖန် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအပေါ် တစ်စစ ဖိအားပေး နှိပ်ကွပ်လာခြင်းက ပိုပြီး ထင်ရှားလာပါသည်။ အမေစု၏ ချစ်ဖခင်ကြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဗမာအမျိုးသား ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သွေး (နှင့်) အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အိန္ဒိယနွယ် ဆရာကြီး ဦးရာဇာတ်၏ သွေးတို့သည် အမိမြန်မာနိုင်ငံတော် အတွက် ကြမ်းတစ်ပြင်တည်း၌ ခွဲမရအောင် ရောယှက်သွားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဤပစ္စုပ္ပန် အကွက်ချ ပုံဖော်ချက်များဖြင့် အတိတ်ကသွေးပေါင်းစုကို ခွဲခြားလိုက်ပါလျှင် အနာဂတ်ဝယ် သွေး၏ တစ္ဆေ ခြောက်လှန့်ခြင်း ခံရတော့မည်ဟု မြန်မာပြည်ကိုချစ်သော ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သား အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များမှ စိုးရိမ်နေပါသည်။ သမိုင်းက ပေးသော သင်ခန်းစာများက သက်သေပြုနေပါသည်။
အမေစုကို ကျွန်တော်တို့မှ သူရဲကောင်းတစ်ဦးအဖြစ် ထာဝရ မြင်သွားချင်ပါသည်။ အမေစုအတွက် အမြဲဂုဏ်ယူချင်နေပါသည်။ အမေစု၏ပြေးလမ်းမှာ ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ပါသည်။ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီစံနစ်သည် တရားမျှတမှု နှင့် လူ့အခွင့်အရေးတန်ဖိုးထားမှု အပေါ်၌ အခြေတည်နေပါသည်။ အမေစုသည် ဝေဖန်မှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီးဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသော်လည်း လက်ရှိအချိန်တွင် ကြားညှပ်နေပြီ၊ ခေါင်းခဲနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူပြည်သားအများစုက ရိပ်စားမိပါသည်။ ကိုယ်ချင်းစာပါသည်။
ထို့နည်းတူ မတရားခံနေရသောသူတို့၏ အသက်၊ သွေး၊ ဘ၀၊ မျက်ရည်၊ ငိုရှိုက်ညည်းငြူချက်များအပေါ် အမေစုထံမှ စာနာမှုစကားလုံးလေးများကိုလည်း ကျွန်တော်တို့အပါအ၀င် ကမ္ဘာတစ်ခွင်က ငံ့လင့်နေကြကြောင်း အမေစု သတိမပြုမိလေရော့သလား ?
အမေစု၏ စာနာမှုစကား တစ်ခွန်းသည် ရက်စက်မှုခြေလှမ်းများစွာကို ရပ်တန့်သွားစေနိုင်ကြောင်း အမေစုကိုယ်တိုင် မသိလေရော့သလား ?
ပန်းတိုင်မရောက်သေးသောအမေစု – လမ်းကြောင်းချော်ထွက်လေရော့သလား ?
အမေစုရယ် ……………….. !
အများစုဖက် မျက်စေ့မှိတ် ရပ်တည်လိုက်သည့်သူထက် အမှန်တရားပေါ် ရဲရဲတောက်ရပ်တည်သော ၂၁ ရာစုခေါင်းဆောင်ကြီး တစ်ဦးအဖြစ် ကျွန်တော်တို့ မြင်ရပါဦးမလား၊ မြင်နိုင်ပါဦးမလား၊ မြင်ခွင့်ရှိလေဦးမလား ဟူ၍ မေးခွန်းပေါင်းများစွာဖြင့် ………………… ။
Tags: Burma, Gautama Buddha, History, Muslim, Organisation of Islamic Cooperation, Rohingya people, Thein Sein, Yangon
This entry was posted on November 28, 2012 at 8:43 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “ပြေးလမ်းချော်လေရော့သလား အမေစုရယ်?”
November 29, 2012 at 8:16 am | Reply
Compare with OIC protest. But to develop the country we need to continue doing this project…
China no problem..Just let them do as we need to keep our promises…
U Paing..May be we need to cancel.
Why military gov given to its party/busi
It isaCONFLICT of INTEREST.
Withdraw ….OR….. let U Paing compensate with enough money to the effective villagers.
Part of the profit of U Paing should also be given to the locals and at least 50% should be given to the Sagaing State and the National Government.